दिनको सुरुवात यस्ता खानपान देखी गरे न रोग लाग्छ, न भोक जाग्छ – पूरा पढ्नुहोस् – Enepali News
दिनको सुरुवात यस्ता खानपान देखी गरे न रोग लाग्छ, न भोक जाग्छ – पूरा पढ्नुहोस्
June 17, 2020 509
हामी विहान उठेर नास्ता गर्छौं । स्वास्थ्यका लागि नास्ता अनिवार्य मानिन्छ । हुन त कतिपयले बिहानको नास्ता अनुपयुक्त हुने तर्क पनि गर्छन् । पछिल्लो समय खानपान सम्बन्धी बढेको सर्तकता र स्वास्थ्य सचेतनाले गर्दा धेरैले बिहानको नास्ता गर्छन् ।
नास्ताले दिनभरका लागि शरीरलाई उर्जा दिन्छ । त्यसैले बिहानको नास्ता हेभी तर स्वस्थ्यकर हुनुपर्छ भनिन्छ । बिहान ओछ्यान छाड्नसाथ मनतातो पानी पिउनुपर्छ । यो कुरालाई पनि धेरैले पालना गर्दै आएका छन् । मनतातो पानी पिउँदा त्यसले शरीरका भित्री अंगहरुलाई सक्रिय तुल्याउनका साथै पाचन यन्त्रलाई राम्रो गर्छ ।
दिनको सुरुवात मनतातो पानीबाट
विज्ञापनमा ‘हरेक दिनको सुरुवात चियासँग’ भनिएपनि अहिले धेरैले मनतातो पानीबाट दैनिकी सुरु गर्छन् । चिया भनेको दुध, चिनी मिश्रति चियालाई बुझिन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि घातक हुन्छ । जबकी ग्रीन टि वा अग्र्यानिक अर्थोडक्स चिया भने लाभदायक मानिन्छ ।
मनतातो पानी, ग्रीन टि वा कागती पानी पिइसकेपछि धेरैले दिनको आरम्भ गर्छन्। त्यसपछि पालो आउँछ नास्ताको । कतिपयले नास्ताको ठाउँमा भात खान्छन् । भात भनेको हाम्रो परम्परामा दाल, भात, तरकारी, अचार आदि हो ।
अब बिहानको खाना खाइसकेपछि कतिले मध्यन्ह खाजा खान्छन् । त्यसबीचमा चिया पिउँछन् । बिहानको खाना, मध्यन्हको नास्तापछि पालो आउँछ रातको खानाको । अक्सर हामीकहाँ रातको खाना सात, आठ वा नौ बजेको समयमा गरिन्छ । रातको खाना पनि बिहानकै जस्तै दाल, भात, तरकारी हुन्छ ।
हाम्रो खानपान शैलीः रोगको थैली
यो तालिकालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने के हाम्रो खानपान शैली स्वस्थ्यकर छ ? अर्थात हामीले जसरी, जुन समयमा, जति खाना खान्छौं, त्यो शरीरका लागि आवश्यक छ ? अपुग छ वा बढी भयो ? वास्तवमा हाम्रो खानपान शैली त्यती स्वस्थ्यकर छैन ।
त्यही कारण धेरैजसो नेपाली खानपानकै कारण रोगी बनेका छन् । यसको पहिलो उदाहरण त ग्याष्ट्रिक हो । यसलाई नेपालीको साझा रोग पनि भनिन्छ । ग्याष्ट्रिक मुलत खराब खानपानकै कारण हुने गर्छ । ग्याष्ट्रिकले पाचन यन्त्रलाई बाधा पुर्‍याउँछ । यो क्रमस अल्सर हुँदै क्यान्सरसम्म पुग्न सक्छ ।
त्यसैले ग्याष्ट्रिक सामान्य समस्या होइन । यसको समयमै निदान खोज्नुपर्छ । अतः यसको प्रभावकारी निदान भनेको औषधी भन्दा पनि सन्तुलित र सही खानपान नै हो । हाम्रो खानपान शैलीले निम्त्याएको अर्को समस्या हो, मोटोपन ।
धेरैजना अहिले मोटोपनको शिकार भएका छन् । नेता, मन्त्री, व्यवसायी, उद्यमी, पेशाकर्मी सबैजसोको पेट पुट्ट निस्किएको देखिन्छ । यस्तो पेट आफैमा रोगको घर हो । शरीरमा अतिरिक्त जमेको बोसोले पेट निस्कन्छ, जो अनेक रोगको कारण बन्न सक्छ ।
हामी मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पनि ग्रसित छौं । दुबै रोग खराब खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याउने हुन् । मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट बच्नका लागि मात्र होइन, यसको नियन्त्रणका लागि पनि खानपानमै सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
यी बाहेक थुप्रै किसिमका रोगहरु हामीलाई खराब खानपान र खानपान शैलीकै कारण लाग्ने गर्छ । त्यसैले रोगमुक्त भएर स्वस्थ्य जीवन बाँच्नका लागि खानपानको खास शैली जान्नुपर्छ । यसको लागि धेरै कुरा जान्न पर्दैन । केवल खाने तालिका र खानेकुराबारे आधारभूत जानकारी भए हुन्छ ।
थोरै थोरै, पटक पटक
स्वस्थ्य शरीरका लागि दिनमा चार, पाँच पटकसम्म खानु राम्रो मानिन्छ । अर्थात एकै पटक धेरै होइन । बरु, पटक पटक थोरै थोरै खानुपर्छ । अझ प्रभावकारी ढंगमा बुझ्नुपर्दा बिहानको खाना धेरै र त्यसपछिको खाना क्रमस घटाउँदै लानुपर्छ ।
राती सुत्नुअघिको खाना सुपाच्य र थोरै हुनुपर्छ । खाना खानसाथ सुत्नु राम्रो होइन । खानेकुरा स्वस्थ्यकर हुनुपर्छ । सागपात, सलाद, फलफूल, जुस, सुपको मात्रा धेरै हुनुपर्छ । खाना सन्तुलित र सुपाच्य हुनुपर्छ । सन्तुलित खाना भनेको हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको आधारमा निर्धारण गरिएको खानेकुरा हुन् ।
एउटा खानेकुरामा जुन पोषक तत्व पाइन्छ, अर्कोमा त्यो नपाइन सक्छ । त्यसैले सबै किसिमको पोषक तत्व ग्रहण गर्नका लागि थरीथरीको खानेकुरा खानुपर्छ। कुनैपनि पोषक तत्व आवश्यक भन्दा बढी वा कम भएको राम्रो मानिदैन ।
यो सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसैले कुन खानेकुरामा के पाइन्छ, त्यो कति खाने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कुन खानेकुरा कति खाने भन्नेले मात्र पनि पुग्दैन । त्यो कति बेला खाने भन्ने पनि जान्नुपर्छ ।
दिनमा कति पटक खानेकुरा खाने भन्ने तालिकाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सही ढंगले पोषण आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यो भनेको भोजन व्यवस्थापन पनि हो । किनभने एकै पटक धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा पाचन पक्रियालाई असर गर्छ । त्यसैले समय तालिका अनुसार खानेकुरा खानु राम्रो हो ।
स्वास्थ्यसम्वन्धी विज्ञहरुका अनुसार दिनभरी थोरै थोरै खानेकुरा खाइरहनु स्वास्थ्यका लागि हितकर हुन्छ । तर, धेरै खायो भने त्यसले फाइदाको साटो हानी गर्छ । पटक-पटक गरेर थोरै-थोरै खानेकुरा खाँदा शरीरमा फ्याट जम्मा हुन पाउँदैन किनकी शरीरको फ्याट बर्न गर्ने क्षमता बढ्छ ।
यसबाट ब्लड सुगरको लेभल पनि नियन्त्रणमा रहन्छ र दिनभर शरीरमा उर्जा प्रवाह हुन्छ । यो पनि ध्यानमा राखनु पर्छ कि खाना बिस्तारै र राम्ररी चपाएर खाँदा सबै पोषक तत्व शरीरले ग्रहण गर्न सक्छ र खाना सजिलै पच्छ पनि ।
किन एकै पटक धेरै खान्छौं ?
हामी किन एकै पटक धेरै खान्छौं ? किनभने हाम्रो खाने तालिका नियमित छैन । जब भोक लाग्छ, हामी मन थाम्न सक्दैनौं । मन अघाउनेगरी खान्छौं । मन त अघाउँछ, पेटले भने बोझ लिनुपर्छ ।
निश्चित तालिका मिलाएर ठिक समयमा खानेकुरा खादा पेट खाली हुँदैन । भोक अनुभव हुँदैन । फलत जथभाभावी खानबाट बचिन्छ ।
डाइबिटिजमा रोगीहरुले दिनमा ३ पटक मात्र नभएर ५-६ पटक थोरै थोरै खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । यसबाट शरीरको क्यालोरी बर्न हुन्छ र रगतमा सुगरको मात्रा पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । यदि तपाईं आफ्नो वजन क मगर्न चाहनुहुन्छ भने पनि दैनिक पटक-पटक खानेकुरा खानु आवश्यक छ ताकि तपाईंको मेटाबोलिज्म स्थिर रहोस र क्यालोरी बर्न भइरहोस । यदि क्यालोरी एब्जर्व हुनुका साथसाथै बर्न पनि भइरह्यो भने यो जम्न पाउँदैन र तौल नियन्त्रणमा रहन्छ ।
खाना समय अनुसार खाने कि भोक लागेपछि मात्र ? जानौं फाईदा र बेफाईदा
हामी आजकाल शरिरको आवश्यकताका लागि भन्दा पनि समयका लागि खाना खाने भएका छौं । हामी यति ब्यस्त भएका छौं की खाना खानका लागि पनि कयौंले समय तालिका बनाएका हुन्छौं । तर समय ब्यवस्थापनको यो तरिका सबै तरिकाले हानी नै गर्ने भने अवश्य छैन ।
विहान १० बजे घडि हेर्दै भन्छौं, ‘अहो दश बजिसकेछ अब त खाना खानुपर्छ ।’अनि अलि विहानको समयमा भन्छौं,‘बल्ल सात बजेको छ के खाना खानु यत्ति छिटो ?’
अब विचार गर्नुहोस् । हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार चलेका छौं त ? खानाको कुरामा पनि हामीलाई घडिले कजाईरहेको छ । हरेक सेकेण्ड उत्तिकै महत्वपूर्ण ठान्ने हामी आफ्नो शरिरलाई महत्व दिएकै हुँदैनौं । फलस्वरुप आजकाल मानिसहरुलाई लाग्ने रोगका प्रकृतिहरु पनि बदलिएका छन् । मानिसलाई लाग्ने अधिकांश रोगहरु खानपानकै कारण लाग्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
त्यसो भए समयमै खाने कि भोक लागेपछि ? थाहा पाउनुस् भोजनको नियम
भोक लागेपछि खाना खानुका फाइदा
१. शरीरको आवश्यकता पुरा हुन्छ
२. शरीरले पौष्टिक तत्वलाई राम्ररी ग्रहण गर्छ
३. थकान कम हुन्छ
४. काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिन्छ
५. खाना खानकै लागि समय कुरिरहनु पर्दैन
भोक लागेपछि मात्र खाना खाँदाका बेफाइदा
१. सही पोषकतत्व प्राप्त गर्न सकिन्न
२. आवश्यकताभन्दा बढि खाइन्छ
३. समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ
समयअनुसार खाना खाँदाका फाइदा
१. सेड्यूलमा चल्न शरीर अभ्यस्त हुन्छ
२. एसिडिटी र थकान हुँदैन
३. शरीरलाई खाना सोस्न समय प्राप्त हुन्छ
४. समय व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ
समयअनुसार खाना खाँदाका बेफाइदा
१. भोक मर्छ
२. खाना नाश हुन्छ
३. पेटमा विभिन्न किसिमका समस्या हुन सक्छ
४.जबरजस्ती खाँदा खाना रुच्दैन
५. चाँडै थकान हुन्छ
साथै- यसरी घटाउन सकिन्छ कोलेस्ट्रोल :
कोलेस्ट्रोल बोसोयुक्त तत्व हो । कलेजोले यसको निर्माण गर्छ । हामीले खानासँग जुन बोसो प्राप्त गर्छौं, त्यसलाई शरीरले परिवर्तन गरेर कोलेस्ट्रोलको निर्माण गर्छ ।
स्याउ निकै प्रचलित फलफूल हो । संसारका अधिकांश मुलुकमा स्याउ उपलब्ध हुन्छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउ शरीरका लागि निकै फाइदाजनक छ । स्याउ नेपालमा पनि निकै प्रचलित छ । यसबाट पर्याप्त मात्रामा प्रोटिन र भिटाभिन प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसको नियमित सेवन गर्दा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउने काम मात्र गर्दैन कि रक्तचापलाई पनि सामान्य राख्ने काम गर्छ । स्याउमा पेक्टिनको घुलनशील रेसा हुन्छ । जसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउने र शरीरका लागि एन्टिब्याक्टेरियल फुडको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छ । यसलाई दाना या जुसका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई ब्रेकफास्ट र स्न्याक्सका रूपमा लिँदा पनि राम्रो हुन्छ ।
Prevचिनियाँ सेनासँगको भिडन्तमा २० भारतीय सैनिक मारिए
Nextतपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? ४ उपाय जसले बर्सनेछ लक्ष्मीको कृपा
दाउन्नेमा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुचारु
यसरी तयार पारेका थियौं नेपालको पहिलो नक्सा
आज मलेसियाबाट १८ नेपालीको शव ल्याइने